ယခုပင် CLUELESS သွန်းလောင်း: သူတို့အဘယ်အရာကိုတူနဲ့သူတို့အခုဘာလုပ်နေလဲ? - သတင်း
Clueless ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြုံငုံ Vibe နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှဒါအလယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒါဟာတကယ်တော့ယခုအပတ် 25 လှည့်အံ့သြစရာပါပဲ။ လိုပဲ၊ ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်မမွေးခင်ကထွက်ခဲ့ပေမယ့် Cher Horowitz အကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ် အနည်းဆုံး တစ်ရက်တစ်ကြိမ် - မဟုတ်ပါ၊ တစ်နာရီတစ်ကြိမ်။ ကျနော်တို့ကကိုးကားတယ်၊ ငါတို့လဲကြိုက်တယ်၊ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးမြင်တုန်းကလိုပဲချစ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်အိုဟောင်း dude င်! လိုပဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ကဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ၊ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက်ဒီအချိန်ကအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားနေ ဦး မှာပဲ။ လျှင်အဖြစ်!
သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်သည်! ယခု Clueless သရုပ်ဆောင်များသည်၎င်းအကြောင်းကိုပုံမှန်ပြောဆိုနေဆဲပင်ဖြစ်သည် (Donald Faison ခေါ် Murray သည်သူ၏ podcast ပေါ်တွင် regcast တွင်တင်နေသည်) ။ ထိုသို့သူ Alicia Silverstone အစဉ်အဆက်ပြုတော်မူပြီအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်နေဆဲ (ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးသူ Alicia ဒါပေမယ့်သင်သိ, ငါတို့သိ, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့င်) ။ သို့သော်ယခုအပေါငျးတို့သ Clueless သွန်းယခုအဘယ်မှာရှိသနည်း အချို့သည်အလွန်ကြီးမားပြီးသင်မေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ - လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ကလူငယ်စမ်းရေတွင်းမှပေါများစွာသောက်သုံးခဲ့သည့်အသက်မပြည့်သေးသောပေါလ်ရတ်ဒ်နှင့်အချို့သည်သင့်အားစိတ်ကိုချောက်ချားစေသည်။ ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ ဤသည် 25 နှစ်အပေါ်ယခု Clueless သွန်းနှင့်အတူသွားမယ့်အရာဖြစ်တယ်။
သွားဆရာဝန် ၁၀ ယောက်အနက် ၉ ယောက်ကအကြံပြုပါသည်
သူမအသက် (၁၇ နှစ်) တွင် Clueless ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်ရိုက်ကူးပြီးကတည်းက Alicia Silverstone သည်အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွင့်မဟုတ်ပါ - သို့သော်သူမအသိအမှတ်ပြုခံရမည့်အရာများစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူမသည်အဲလက်စ် Ryder စာအုပ်များ၊ Scooby Doo2ကိုအခြေခံသည့်ရုပ်ရှင် Stormbreaker တွင်ထင်ရှားသည်။ Monsters Unleashed (Fred သည်ကျွန်ုပ်အား Coolsville ဟုယူမှတ်သည်ဟုထင်မြင်စေသော TV သတင်းထောက်ဖြစ်သည်) နှင့် Wimpy Kid ၏ဒိုင်ယာရီတွင်သူသည်ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူမသည် The မြင့်မားသောသမင်ဒရယ်၏ The Killing နှင့် The Lodge ကဲ့သို့သောပိုမိုမြင့်မားသောနဖူးအရာများတွင်လည်းပါ ၀ င်သည် - Batman ရုပ်ရှင်၌ကြောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကစားနေသည်။ (ဒါဟာ Uma Thurman အဆိပ်အိုင်ဗီရှိရာတစ်ခုဖြစ်သည်) ။
မကြာသေးမီကသူမလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဝဘ်ဆိုက်ကို set up ရဲ့, ကြင်နာမှု သူမတိတိကျကျတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူကြောင့်သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောလူနေမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ သူမလည်းသူမ၏သား Bear Blu မှမိခင်တစ် ဦး ပဲ!
မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာဒီဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံရှိ # BlogHer20 Healthy at Home မှာစကားပြောရတာအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်မင်းကသင်၏စီးပွားရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်အတိုင်းကျင့်သုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ကျန်းမာခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးကိုခံစားခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက @blogher သို့တက်ရောက်ရန်မှတ်ပုံတင်ပါ။ ငါ၏အဇီဝအတွက် link ကိုကနေတဆင့်ဒီမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်
မျှဝေသည် Alicia silverstone (@aliciasilverstone) ၂၀၂၀၊ မေလ ၁၆ ရက်၊
တ ဦး တည်းသာ Dionne သင် 1996-1999 ကနေ (ကထိခိုက်အတိအကျမဟုတ်ခဲ့) သင်ဘယ်တော့မှမကြားဖူးဘူးတဲ့ Clueless လှည့်ဖျားလုပ်ဖို့ပေါ်သွားသူ Stacey Dash ကကစားခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က TV show နှင့် Kanye ဂီတဗီဒီယိုတို့တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့် Stacey သည်ပုံမှန်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဖြစ်လာသည် Fox News ။ သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာ… မေးစရာ ။ သူမသည် trans ဆိုတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကျား၊ မကိုက်ညီတဲ့အများသုံးအိမ်သာတွေကိုသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မယုံဘူး၊ Black History လအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုရှုတ်ချလိုက်တယ်။ သူမသည်သူမဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း 2019 ခုနှစ်တွင်ပြည်တွင်းဘက်ထရီမှုအတွက်အဖမ်းခံခဲ့ရသည် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်း , နှင့် Dash သည်သူမစွပ်စွဲခံထားရသည့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည် ဇနီးမောင်နှံသည်လွန်ခဲ့သောတစ်လ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။
တက်ကြွနေပါ။ သင့်ဘဝ၌အပြုသဘောတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ 'နွေ ဦး သန့်ရှင်းရေး' အနည်းငယ်လုပ်ပါသို့မဟုတ်ပြေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးကိုခံစားရရန်လိုအပ်သည်။ Corona-vibes များကိုသင့်အားမကျစေပါနှင့်! သင်၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်သန္နိdetermination္ဌာန်ချခြင်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုမဆိုကူညီနိုင်သည်။ ။ အကြှနျုပျ၏ဆုတောငျးခကျြနေပါစေသင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါအဘယျသို့အခြေအနေများလူတိုင်းကိုထွက်သွား။ , သင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံး၌သင်၏စိတ်တွင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကြီးထွားမှုနှင့်အတူလာမည့်အပတ်ကသို့သွားလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်! ။ သငျသညျ grounded နေဖို့ဘာလုပ်နေလဲ? ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ #inspiration #inspirational #celebrity #faith #faithfulness #inspirationalquotes #lifelesson #teach #learn #success #successful #staceydash #jesus #warrior #redemed #faith
မျှဝေသည် Stacey Dash (@staceydash) ၂၀၁၂၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်၊ ညနေ ၅:၂၃ နာရီတွင်
တိုင်ကစားသူ Brittany သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစွာကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူမသည် Uptown Girls, Girl Interrupted, Just Married နှင့် 8 Mile တို့တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး Clueless Post တွင်အောင်မြင်သောရုပ်ရှင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ကျော်ကြားသောကခုန်ဂီတတစ်ခုတည်းကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသူသည်အသက် ၃၂ ​​နှစ်အရွယ်တွင်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသွားသောအခါဂီတထဲဝင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
Paul Rudd ဘယ်မှာလဲဆိုတာတောင်ငါပြောပြဖို့လိုအပ်လား။ ! နေရာတိုင်းမှာပါ ယခုသူသည် Clueless သရုပ်ဆောင်မှုတွင်အအောင်မြင်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည် Mike ၏သူငယ်ချင်းများနောက်ဆုံးကစားချိန်တွင်သူပါဝင်ခဲ့သည်၊ သူသည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သော Judd Apatow ရုပ်ရှင်တိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည် (Knocked Up, နှစ် ၄၀ နှစ်အပျိုစင်၊ ဤသည်သည် 40) ။ သူသည် Anchorman, Avengers နှင့် Ant Man ကဲ့သို့သော blockbusters များတွင်လည်းရှိခဲ့သည်။ သူရွေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုသူရွေးတာလား၊ သူသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းကဇနီးဂျူလီ Yaeger နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူသည် Clueless ရိုက်ကူးပြီးနောက်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။
ဟေးငါတို့ကိုကြည့်, ဘယ်သူ woulda ထင်? ငါမဟုတ်
Donald Faison သည် Dash နောက်သို့ လိုက်၍ Clueless spin off စီးရီးသို့သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် Uptown Girls တွင် Brittany Murphy နှင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ထို့နောက် နောက်ဆုံးတွင် Turk ၏အခန်းကဏ္Scrကို Scrubs တွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုသူ့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ သူသည်ခရစ်စတိုဖာတာကို Zach Braff (JD သို့မဟုတ် John Dorian) နှင့်အတူကိုးနှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးယခုအချိန်သည်သူငယ်ချင်းများဖြစ်နေဆဲပင်။ သူတို့ဟာမကြာသေးမီက Fake Doctors လို့ခေါ်တဲ့ Podcast တခုကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး Real Friends ကထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် Scrubs လုပ်ခြင်း၏နောက်ကွယ်နောက်ကွယ်တွင်ရှင်းပြထားသည်။ သူဟာဂျက်စီကာ Simpson ရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက် CaCee Cobb နဲ့လက်ထပ်ပြီး၊ ကလေးတွေအများကြီး။ Zach Braff သည် CaCee သို့မင်္ဂလာဆောင်၌သူ၏အကောင်းဆုံးလူဖြစ်သည်။
မျှဝေသည် Donald Faison 6:42 pm တွင် PDT မှာ, 2020, ဇူလိုင်လ 3, (@donald_aison)
Ambular သည် Dash နှင့် Faison နောက်သို့ လိုက်၍ Clueless လှည့်ဖျားမှုကိုလိုက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကသူမသည် 90210၊ Sabrina the Teenage Witch (ဟောင်းတ Netflix အသစ်မဟုတ်) နှင့် Demi Lovato ရဲ့ Disney show, Sonny With A Chance အပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်များ၊ သူမသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူချားလ်စ်ဘီဂယ်လူးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၂ ယောက်စလုံးတွင်အတူတကွသမီးနှစ်ယောက်ရှိသည့် Scarlett Avery Bigelow ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ !! (အထူးသဖြင့်ငါ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးလာပါ၊ မင်းသောက်နေပြီဆိုတာမင်းသိပါ။ ) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ် CHERERS သို့ ၀ င်ပါ။ လူမှုရေးကွန်ယက်ပေါ်တွင်သင်၏ selfie ကို #PHersUp နှင့် 6pm EST သို့အချိန်မရွေးဝေမျှပါ။ #CheersUp ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ Crook & Marker သည်ဖျော်ယမကာစပ်များနှင့်လိုအပ်သော hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်သူများအတွက်ငွေရှာဖွေရန်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာလှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကို @karitejeri @zperles @rsthebault @ultralainer @ eileenmchale1 @melissajoanhart @jennaleighgreen @tommylenk @makeuphag @chrysanthegussis @linzalou @jbogard @ tstar22 @mikeraupr @glohann @dmarineau @martylipton @meganbeaudet @annika_marks @cerinavincent @desilydic @msmaddiecorman အကြောင်းပြောနေတာပေါ့ ) သင်၏ဖျော်ယမကာစပ်ကိုမှတ်သားရန်မမေ့ပါနှင့်! http://www.crookandmarker.com/cheersup ** ဘေးဖက်ဖက်ရှင် - သင်၏အမြစ်များကိုဖုံးအုပ်ရန်သင်၏ခင်ပွန်း၏လည်ပင်းတစ်ချောင်းကိုခေါင်းခေါင်းပဝါအဖြစ်သုံးပါ။ နှစ်သက်လက်ခံမှု ‍♀️ လည်ဆွဲ - @vineyardvines မီးခိုးရောင်အမြစ်များ - ကျွန်ုပ်၏ ၇ နှစ်အရွယ်နှင့် #quarantine 🤯
မျှဝေသည် အဲလီဆာဒိုနိုဗန် 2:39 pm တွင် PDT မှာ, 2020, 2ပြီ2ရက် (@reddonovan)
မကောင်းသောလူဆိုး Elton အဖြစ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောယောက်ျားလေးသည် Sisto ကကစားသည်။ သူသည် Six Feet Under၊ FBI၊ Law and Order တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Suburgatory တွင်အဖေဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကသူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုပုံကိုပဲ!
Jubal ရဲ့သစ်ကို '' လုပ်ပါ။ အဆိုပါနှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ @tduceyduce နေဖြင့်ဒီဇိုင်း
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီစစ္စတို (@sistosistosisto) ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နံနက် ၁၁:၃၇ နာရီ၊ PST တွင်
Travis Birkenstock, မူလ GOAT နှင့် Clueless တစ်ခုလုံးတစ်လျှောက်လုံးမှသာအမှန်တကယ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် (သူတို့အားလုံးဟာအဆုံးမှာတော့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Travis ကတသမတ်တည်းကျနေပြီ) ကို Breckin Myer ကကစားခဲ့သည်။ Breckin သည်ရုပ်ရှင်များစွာကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သငျသညျအမြားဆုံးအလွယ်တကူ Garfield (ရှည်လျားသောမေ့လျော့ဂန္) တွင် Garfield ရဲ့ပိုင်ရှင်နှင့် Rat လူမျိုးအတွက်အဓိကကောင်လေးအဖြစ်သူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုချင်ပါတယ်။ သူလည်းဟေးလ်ဘုရင်နှင့် Franklin နှင့် Bash တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်လို့သူပျော်ရွှင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
ရှပ်အင်္ကျီကအားလုံးကိုကပြောပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုတင်ခြင်းအတွက် @johnresig @thechive ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (Harley ကသဘောတူသည်။ သို့မဟုတ်ရှဥ့်ကိုကြည့်နေသည်) # DumpsterFire2020
မျှဝေသည် Breckin Meyer (@breckinmeyer) ၂၀၁၂၊ 15ပြီ ၁၅ ရက်၊ ညနေ ၅း၂၂ တွင် PDT
အကြှနျုပျ၏ဆ! အတင်းအဖျင်းမိန်းကလေးကိုတိုနီဘလဲ၏ပထွေးအဖြစ် Incredibles နှင့် Toy Story အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခုသူသည်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူအဖြစ် MSNBC (အား NBC ၏လခပေးသောသတင်းကွန်ယက်) တွင်ပုံမှန်ပေါ်လာသည်။
Justin Walker က
ခရစ်ယာန် (ငါ Cher ရဲ့အသံထဲမှာကဆိုပါတယ်ဆိုပါစို့) ။ Justin သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်တွင်ပြပွဲမှထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည်ယခုလ Vogue နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်သူ့ကိုစစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဟုဖော်ပြခဲ့သူ Alicia Silverstone နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အရမ်း, အရမ်းချစ်စရာ။
• ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - Clueless ကိုဘယ်လောက်ထိမှတ်မိနိုင်သေးလဲ၊ ၂၅ နှစ်။
• ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - Clueless မိန်းကလေးထဲကဘယ်ဟာမင်းတကယ်လား။
• ဘယ်ကူမဲ့ကောင်လေးနဲ့သင်အဆုံးသတ်မလဲ ထွက်ရှာတွေ့မှဤပဟေိကိုယူပါ